कसरी साना व्यवसाय को लागी सोशल मिडिया को उपयोग गर्ने Martech Zone
शनिबार, अगस्ट 8, 2015 Douglas Karr
यो मान्छे सोच्न को रूप मा सरल छैन। अवश्य पनि, यसमा काम गरेको एक दशक पछि, मसँग सामाजिक मिडियामा एक राम्रो अनुसरणको एक हेक छ। तर साना व्यवसायहरूमा सामान्यतया १० वर्ष हुँदैन र्याम्प अप गर्न र उनीहरूको रणनीतिमा गति निर्माण गर्न। मेरोमा पनि साना व्यापार, एक उच्च रणनीतिक कार्यान्वयन गर्न मेरो क्षमता सामाजिक मिडिया मार्केटिङ मेरो सानो व्यवसायको लागि पहल चुनौती हो। मलाई थाहा छ मलाई मेरो पहुँच र अधिकार बढाउन जारी राख्नु पर्छ, तर म यो मेरो व्यापारको लागतमा सक्दिन।
साना व्यवसायका लागि, संसाधनको अभाव अक्सर सामाजिक मिडिया सफलताको लागि खडा हुन्छ। भाग्यवस, साना व्यवसायहरूका लागि सामाजिक प्रबन्ध गर्नका लागि एक तरीका छ, तिनीहरूसँग समय, कर्मचारी र बजेटको अभाव भएता पनि। यस पोष्टमा, हामी कम से कम संसाधनहरूको साथ एक प्रभावी सामाजिक मिडिया रणनीति सिर्जना गर्न रणनीतिहरूमा हेर्दछौं। क्रिस्टी हाइन्स, बिक्री बल क्यानाडा ब्लग
सेल्सफोर्स ए टूटेको छaसानो व्यापारको लागि सामाजिक मिडिया रणनीति basic आधारभूत चरणहरूमा।
यथार्थवादी लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस्
तपाईंको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सही नेटवर्कहरू छनौट गर्नुहोस्
गतिविधिमा केन्द्रित हुनुहोस् जुन तपाईंलाई आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्दछ
लक्षित विज्ञापनमा विज्ञापन बजेट खर्च गर्नुहोस्
तपाईको नतीजाहरु मापन गर्नुहोस्
म थप्न चाहान्छु कि यो पूर्ण मार्ग होईन, यो सर्कल हो। तपाईले आफ्ना नतिजाहरू मापन गरेपछि तपाईले फेरि # १ मा फर्कनु पर्छ र तपाईको लक्ष्यहरू रिसेट गर्नुपर्दछ र प्रक्रिया मार्फत काम गर्नुहोस् ... तपाईंको रणनीति परिष्कृत गर्दै र बाटोमा तपाईंको अनुकूलन। म पनी विश्वास गर्छु कि तपाईले छान्नु पर्छ जो नेटवर्कहरू, यो त्यहाँ परीक्षण गर्ने र त्यहाँ दर्शकहरूको लागि प्रत्येक अनुकूलन गर्ने कुरा हो। तपाइँ लिंक्डइनमा बिक्री बढाउन चाहानुहुन्छ, तर फेसबुकमा चेतना बढाउन - उदाहरणका लागि।
टैग: फेसबुकKristi hinesLinkedInबिक्री बलबिक्री बल क्यानाडासाना व्यापारसामाजिक मिडिया गतिविधिसामाजिक मीडिया विज्ञापनसामाजिक मिडिया लक्ष्यहरूसामाजिक मिडिया मापनसामाजिक मिडिया नेटवर्कसामाजिक मिडिया रणनीतिtwitter
ग्राफ: एक बौद्धिक भिडियो क्यामेरा जुन स्वचालित रूपमा सम्पादन गर्दछ
अगस्ट 9, 2015 बेलुका 4:30 बजे
राम्रो ब्लग पोष्ट! सुझावहरूको लागि धन्यबाद।
अगस्ट 10, 2015 मा 2: 08 AM
सुझावहरूको लागि धन्यवाद! सहयोगी!
21 डिसेम्बर, 2016 बेलुका 5:20 बजे
साझा गरिएको जानकारी मन पर्यो, मेरो व्यवसाय बढाउने प्रयास गर्दै, र यी फलोअप गर्नका लागि उत्कृष्ट विचारहरू हुन्।
21 डिसेम्बर, 2016 बेलुका 8:38 बजे
धन्यवाद नैन्सी! याद गर्नुहोस् कि यो एक लगानी हो र सधैं प्रत्यक्ष, तत्काल प्रभाव छैन। सामाजिक सञ्जालको शक्ति तपाईको सन्देश तपाईको तत्काल नेटवर्क भन्दा बाहिर प्रतिध्वनित गर्ने क्षमतामा छ। समय बित्दै जाँदा, तपाईंले थप ध्यान, धेरै अनुयायीहरू, र अन्ततः केही व्यवसाय र रेफरलहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।